निर्वाचनको मुखमा राज्यकोषबाट ४ करोड ५८ लाख वितरण, कस्ले कति पाए? - Nepal Readers
निर्वाचनको मुखमा राज्यकोषबाट ४ करोड ५८ लाख वितरण, कस्ले कति पाए?
सरकारले निर्वाचनको मुखैमा निर्वाचन आचार संहितालाई कुल्चदै आफू निकटका ३ सय १० कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट एकै दिन ४ करोड ५८ लाख ५० हजार भन्दा वढि रकम वितरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा आफैले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आफू निकटका कार्यकर्तालाई निर्वाचनको मुखैमा ४ करोड ५८ लाख भन्दा वढि वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
इसुफ मियाँ, सुनसरी २ लाख अन्नपूर्णमा समाचार छ।